Ciidanka badda ee dowllada Puntlland oo howlgal ka sameeyey degaanka Garax
Gaalkacyo:-Ciidanka badda ee dowllada Puntlland ayaa waxaa ay weerar ku qaadeen koox burcad badeed ah oo ku dhuumaalaysanayey degaanka Garax oo ka tirsan degmada Garacad ee Gobolka Mudug, iska horimaadka ayaa waxaa ka dhashay khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. Ciidanka badda ee dowllada Puntlland ayaa waxaa ay dileen ilaa 3 ka tirsan kooxda burcad badeedka ah iyagoona ka qabtay ilaa 5 kale.
Ciidanka badda ee dowllada Puntlland ayaa shalay gaaray degaanka Garax ka dib markii kooxo burcadbadeed ah ay ku soo laabteen degaankaas ka dibna ay ciidanku ku baxeen oo ay hareereeyeen goob ay ku sugnaayeen.
Gudoomiyaha degmada Jariiban ee Gobolka Mudug Sheekh Maxamuud Kaytoon oo ku sugan Garoowe ayaa saxaafada u xaqiijiyey in Ciidanka badda ee dowllada Puntlland ay howl gal ka sameeyeen degaanka Garax oo ka tirsan degmada Garacad ayna ku soo qabteen koox burcad badeed ah.
Gudoomiyaha degmada Jariiban ee Gobolka Mudug Sh Maxamuud Kaytoon ayaa saxaafada u sheegay in ciidanka badda ee Puntlland ay ku ogaadeen kooxdaan burcadbadeedka ah ka dib markii ay degaankaas ku sahmiyeen diyaarad ka dibna ay kooxda burcadbadeedka ah ay ku soo rideen rasaas.
Gudoomiyaha degmada Jariiban ee Gobolka Mudug Sh Maxamuud Kaytoon ayaa sidoo kale sheegay in degmada Jariiban laga tirtiray kooxaha buracadbadeedka ah iyadoo ciidanka Puntlland oo kaashanaya dadka degaanka ay la dagaalami doonaa kooxahaas burcad badeedka ah oo doonaya in ay mar kale gabaad ka dhigtaan degaanada ku xeeran Degmada Jariiban.